Xaalaasha iyo xaaraanta
"Cuntada Xalaasha ah" waa cunto ama waxyaalo aysan kujirin Khaansiir, ama waxa khaansiirka kasoo baxa, sida xayrta khaansiirka, saliida laga miiro khaansiirka iyo hilibka khaansiirka, waxaa kale oo xaaraam ah wixii uu kujiro Khamri ama aalkolo ama waxa kasoo dhexbaxa labadaas (khamriga iyo aalkolada). "Cuntada Xaraamta ah" uma bannaana Islaamku in uu isticmaalo. Qofka Muslimka ah waa in uu raadiyaa cunto "Xalaal" iskana ilaaliyaan ama ka fogaadaa wixii "Xaraam" ah. Ugu horayn waxkasta oo aad ku aragtid kelmedaha: "pork, lard, bacon, ham" dhamaan waa magacyo uu leeyahay khaansiirku waana xaaraam dhamaantood.
Waxaa jira xaqiiqo cuntooyinka waxyaabaha laga sameeyo ama lagu daro oo ay tahay in qof kasta oo Muslim ah ogaado.
Waxyaabaha soo socda oo kamida kuwo lagu daro cuntada waxaa aad u siticmaala shirkadaha sameeya cuntada. Qaar ka mid ah waxyaabahaas cuntada laga sameeyo ama lagu daro waa xalaal, qaarna waa mash-buuh ama shaki ayaa kujira, qaarna waa xaaraam. Fadlan la soco liiskaasi waa qayb kamida waxyaabaha cuntooyinka laga sameeyo, ee ma ahan mid dhammaan soo koobaya cuntada.
Waxaan isku daynay, inta bini-aadamku awoodo, in ay sax yihiin akhbaarta aan halkan kusoo tebineyno, isla mar ahaantaana ay yihiin kuwo Islaamka waafaqsan, laakiin haddii aad ka heshid wax taas ka duwan fadlan nala soo socodsii.
Haddii cuntada waxyaabaha ku jira ama laga sameeyo uu yahay mash-buuh ama aadan hubin waxa uu ka samaysan yahay, waxaad wici kartaa (ama la xiriiri kartaa) shirkadda cuntadaas samaysay si aad u ogaatid waxa cuntadaas lagu daray. Inta badan magaca iyo cinwaanka shirkadaha iyo meelaha cuntooyinka lagu diyaariyey waxa ay ku dul qoran yihiin qasacadaha ama baakadaha cuntadaasi ku jiraan.
Ogowna Allah hortiis qofkasta wuxuu mas'uul ka yahay ficilkiisa oo uu kujiro waxa uu cunayo.
Allah ayaan ka baryeynaa dembidhaaf. Adiguna fadlan Allah nooga bari horumar noloshanada halkan (dunida) iyo Janno aakhir.
waxaa diyaariyey: Maxamed Cali
Halal or Haram - Philippines